Iwo mavhidhiyo ekuratidzira eiyo iPhone X uye iPhone 8 uye 8 Plus izvozvi zvave kuwanikwa paYouTube | IPhone nhau
Maawa mushure mekupedza iyo yakakosha, Apple yakaturika paakaundi yake yeYouTube mavhidhiyo ese ataona mumashoko ekupedzisira ekupedzisira iyo yakaitwa nezuro paSteve Jobs Teather iri muApple Park. Iwo mavhidhiyo parizvino ane anonyanya kushanyirwa ndeaya ane hukama neiyo iPhone X, kunyanya maviri mavhidhiyo, uye iyo inopa kuvandudzwa kweiyo iPhone 2 uye 7 Plus, ine zita remazita ayo anoenda kunhamba 7 uye 8 Plus, ichisiya parutivi S dzakateedzana. kune iyo Apple yataive tajaira.
0.2 Sangana ne iPhone X
0.3 iPhone X - Kuzivisa
0.4 iPhone 8 uye iPhone 8 Plus - Yakafukurwa
1 iPhone 8 uye iPhone 8 Plus mumasekondi masere
Vhidhiyo iyo Apple inotiratidza iyo itsva iPhone 8 skrini.
Sangana ne iPhone X
Vhidhiyo yekungori pasi peminiti nehafu apo Apple inotiratidza nekukurumidza iwo makuru ekutanga anopiwa neiyo iPhone X, senge Chiso ID, emojis, makamera uye yekucherechedzwa system, iyo skrini isina bhatani repamba, isina waya kuchaja, iyo A11 Bionic processor ...
iPhone X - Kuzivisa
Iyi vhidhiyo, ine inguva inopfuura maminitsi matatu, inotitaridza senguva dzose, Izwi raJony Ive, musoro wedhijitari wekambani yeCupertino-yakavakirwa, uyo anoita kunge danho rake rinotya rinomumanikidza kudzikisira kutaridzika kwake kuzwi-pamusoro chete. Vhidhiyo iyi inotiratidza mashandiro eiyo iPhone X, pamwe nekushanda kwezvinhu zvitsva zvakaita seFace ID, sisitimu yekuchengetedza iyo yauya ku iPhone ichitsiva zvachose Touch ID.
Izvo zvinotiratidzawo mashandisiro anoita emojis, yatinogona kutumira mameseji akasarudzika tichishandisa emoji dzakasiyana Iyo yakagadziridzwa portrait bhasikoro iyo iyo iPhone X inotipa isu inoratidzwawo muvhidhiyo ino, pamwe neidzo nyowani sarudzo dzekurekodha idzo modhi iyi inotipa isu, senge kurekodha mu4k mhando pa60 fps kana 240 fps ine 1080p resolution.
iPhone 8 uye iPhone 8 Plus - Yakafukurwa
Iyo modhi yakasimudza zvishoma kutarisira zviri pachena kuti iyo iPhone 8 uye 8 Plus, maviri mamodheru ayo kunyangwe akajairika emukati kuvandudzwa, anotipa dhizaini yakafanana chaizvo neye7 uye 7 Plus mamodheru, asi isu hatifunge kuti kumashure kwakagadzirwa negirazi, tichisiya parutivi iyo aluminium iyo yakaperekedza iyo iPhone kubva kuvhurwa yeiyo iPhone 6 uye 6 Plus.
iPhone 8 uye iPhone 8 Plus mumasekondi masere
8-yechipiri vhidhiyo iyo Apple inotiratidza iyo Nhau dzeiyo iPhone 8 uye 8 Plus mumasekondi masere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Iwo mavhidhiyo ekuratidzira eiyo iPhone X uye iPhone 8 uye 8 Plus izvozvi zvave kuwanikwa paYouTube
Iye zvino zvakare vane zvimwe zvakadudzirwa pane yavo Spanish chiteshi:
iPhone 8 uye 8 Plus - Mharidzo
iPhone X - Mharidzo
Apple TV app inowedzera kusvika kunomwe nyika nyowani